Kufsiga carruurta ee dalka India - BBC Somali - Warar
Kufsiga carruurta ee dalka India
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 7 Febraayo, 2013, 12:14 GMT 15:14 SGA
Sanad walba waxaa lagu soo warramaa in ka badan 7 kun oo kiis
Hey'adda xuquuqda bini'aadamka u doodda ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in dowladda India ay ku guul darreysatay inay wax ka qabato xadgudubyada iyo kufsiga lagula kaco carruurta dalkaasi.
Kumanaan carruur ah ayaa sanad walba la kufsadaa dalka India iyo qaar kale oo dhibanayaan ah ayaa loo geystaa xadgudubyo, sida ay sheegtay hey'adda Mareykanka ah ee Human Rights Watch.
Hey'addu waxay sheegtay in sanad walba lagu soo warramo in la kufsado in ka badan toddobo kun oo caruur ah.
Warbixintan cusub ee ay soo saartay ayay ku sheegtay hey'addu in carruurta dhibanayaasha ah inta badan ay si xun ula dhaqmaan ciidanka booliiska.
Warbixinta ayaa ku soo beegantay iyada oo dalka India si weyn looga careysan yahay kooxdii bishii disember kufsaday gabar yar oo markii dambe u dhimatay dhaawacyadii ka soo gaaraytaasi oo markiiba keentay in arrimaha hawenka laga doodo.